Tsy mandeha tsara ny iPhone-ko. Mifandray amin'ny iTunes? Ity ny The Fix! - Iphone
manova kaonty mailaka amin'ny iphone
ny fomba hamafana iphone album
iphone 6 miampy fanavaozana angatahina
iphone 6 plus maody an-doha
Tsy mandeha tsara ny iPhone-ko. Mifandray amin'ny iTunes? Ity ny The Fix!
iPhone dia mahazo kilema noho ny karazan-javatra rehetra, ary matetika ny lozam-pifamoivoizana. Tsy nanadino ny kaody passcode iPhone-nao. Matetika ny mpangalatra dia tsy manandrana mamantatra ny kaody passcode - hamafana ny iPhone fotsiny izy ireo na hivarotra izany ho an'ny ampahany. Izay no mahasosotra an'ity olana ity. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona no tsy mandeha ny iPhone-nao ary milaza ny mifandray amin'ny iTunes , ny fomba fanamboarana ny olana , ary hazavao ny antony mahazatra indrindra mahatonga ny iPhones lasa sembana ka azonao atao ny manakana azy tsy hiverina intsony.
Fa maninona no nanjary sembana ny iPhones?
Nahita iPhones be kilemaina be aho rehefa niasa tao amin'ny Apple. Ireto misy antony roa mahazatra indrindra mahatonga an'izany:
Ankizy. Tian'ny ankizy ny iPhones ary tian'izy ireo ny bokotra manery. Tezitra i Timmy rehefa miato ny bokotra ary tsy faly i Neny fa kilemaina ny iPhone-ny.
Snoopers. Ny namana sy ny mpianakavy dia tsy mahatsapa foana fa tsy manana fina isa tsy voafetra izy ireo hahitana ny passcode iPhone-nao.
tokony handeha amin'ny antso wifi ve aho
Firy ny valim-pifidianana azoko alohan'ny nahatonga ny iPhone tsy kilemaina?
iPhones dia tsy ho kilemaina amin'ny fanandramana passcode voalohany na faharoa tsy mety. Ity misy impiry ianao afaka miditra passcode tsy mety alohan'ny tsy mandeha ny iPhone-nao:
1-5 fanandramana passcode diso: Tsy misy olana.
Fanandramana 6 tsy mety: tsy afa-miasa mandritra ny 1 minitra ny iPhone.
Fanandramana diso 7: iPhone tsy afaka mandritra ny 5 minitra.
Fanandramana 8 tsy mety: tsy afa-miasa mandritra ny 15 minitra ny iPhone.
Fanandramana 9 tsy mety: tsy afa-miasa mandritra ny 60 minitra ny iPhone.
Ezaka 10 diso: “Tsy mandeha ny iPhone. Connect to iTunes ”na iPhone voafafa tanteraka raha Fafao ny angona dia alefa ao Fikirana -> Touch ID & Passcode (na Fikirana -> Passcode ho an'ny iPhone tsy misy Touch ID).
Tsy tsara amin'ny iPhone Keypad aho. Azoko atao ve ny manafoana ny iPhone amin'ny lozam-pifamoivoizana?
Tsia. Sarotra ny manajanona iPhone tsy nahy, ary izao no antony: Azonao atao ny mampiditra passcode diso tsy mitovy isa tsy manam-petra ary miisa fotsiny ho fanandramana passcode 1 tsy marina. Andeha isika hijery ohatra iray.
Any amin'ny fampakaram-bady ianao ary ianao tena mila mahalala hoe iza no nandresy tamin'ny lalao baolina kitra, saingy tsy ho faly ny vadinao raha hitany fa miahy anao bebe kokoa momba ny ekipa baolina kitra nofinofisinao ianao noho ny voadim-panambadiana ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy. Miezaka ny mampiditra ny passcode-nao ianao nefa tsy mijery ny iPhone-nao, saingy tsy mandeha io satria miditra 1536 ianao fa tsy 1539, hatrany hatrany. Tsy mandeha ve ny iPhone-nao? Tsia. Ny iPhone-nao dia ho sembana fotsiny raha miditra 6 ianao samy hafa passcode tsy diso.
Azoko atao ve ny mamoha ny iPhone rehefa tsy miasa?
Mampalahelo fa tsia ny valiny. Raha vantany vao miteny ny iPhone hoe “sembana ny iPhone. Ampifandraiso amin'ny iTunes ”, misy na inona na inona azonao atao ny mamoha azy. Indraindray ny olona dia mieritreritra fa ny Apple Stores dia manana fitaovana manokana afaka mamaha iPhones sembana, saingy tsy izy ireo. Ny hany zavatra azonao atao dia mamafa ny iPhone tanteraka ary manomboka miverina.
Ny vaovao tsara dia ny ahafahanao mamerina amin'ny laoniny ny nomaniny ho solon'izay farany nataonao talohan'ny naha-kilemaina ny iPhone. Raha nanohana ny iPhone ho iTunes na iCloud ianao, dia ho afaka hamerina ny angon-drakitrao aorian'ny mamafa ny iPhone. Rehefa tsy mandeha anefa ny iPhone dia tsy misy fomba hamerenana ireo angon-drakitra misy amin'izao fotoana izao ao amin'ilay fitaovana. Raha tsy manana backup ianao dia tsy maintsy manamboatra ny iPhone avy hatrany hatrany.
Ahoana no hamafana ny iPhone raha sembana?
Azonao atao ny mamafa ny iPhoneo amin'ny alàlan'ny iTunes na iCloud, saingy amporisihiko hampiasa iTunes ianao satria izy io foana miasa raha toa ka ataonao amin'ny fomba nofaritako izany. Raha mampiasa iCloud ianao dia mila mahafantatra ny Apple ID sy ny teny miafinao, ary ny iPhone-nao dia tsy maintsy mifandray amin'ny Internet. Ny fampiasana iTunes no fomba tsotra sy mora indrindra, fa hotantaraiko kosa ny fomba fanaovana roa.
Ny lahatsoratr'i Apple dia manolotra soso-kevitra tsy misy ilana azy, fanandramana diso sy sarotra amin'ny famaritana izay fomba famerenana amin'ny laoniny ampiasaina mifototra amin'ny karazana fifandraisana nifanaovan'ny iPhone tamin'ny solosainao talohan'ny naha-kilema azy. Mandrosoa fotsiny raha tsy azonao izany - izany no ilazako fa sarotra loatra! Tsy misy fatiantoka tanteraka (raha ny marina, mety misy tombony) ny famafana ny iPhone-nao amin'ny fomba atoroko azy, ary izany foana miasa.
palma mangidihidy tànana midika
Ny karazana famerenana atoroko ahy rehefa tsy mandeha ny iPhone dia antsoina hoe famerenana DFU. Nanoratra lahatsoratra izay mamaritra ny tena marina aho Ahoana ny fomba hamerenan'ny DFU ny iPhone anao . Araho ny torolalana amin'ity lahatsoratra ity (mora izany!) Ary miverena eto rehefa vita ianao. Mandehana mankany amin'ilay fizarana antsoina Amboary indray ny iPhone-nao rehefa avy mampiasa iTunes ianao hanombohana ny famerenana amin'ny laoniny DFU.
Raha nanao sonia iCloud ny iPhone-nao ary nodinihinao ny Find my iPhone alohan'ny nanapahana azy dia azonao atao ny mampiasa Tadiavo ny iPhone hamafana ny iPhone-nao. Mila miditra miaraka amin'ny Apple ID sy teny miafinao ianao, misafidy ny iPhone amin'ny Ireo fitaovana ampiasako rehetra menio dropdown, ary mifidiana Fafao ny iPhone . Tohizo ny fizarana manaraka aorian'ny famafana ny iPhone.
Amboary indray ny iPhone-nao
Aorian'ny famerenanao ny iPhone amin'ny iTunes anao na hamafana azy amin'ny alàlan'ny iCloud, ny fomba hirosoana dia miankina amin'ny hoe manana backup iTunes, iCloud backup na tsia backup ianao. Araho ireto torolalana ireto aorian'ny hahitanao ny efijery fotsy Set Up amin'ny iPhone-nao. Raha maizina ny efijery ary tsy azonao antoka raha vita ny famerenana amin'ny laoniny, tsindrio ny bokotra Home amin'ny iPhone-nao. Raha mahita ny efijery Set Up ianao dia miroso.
Raha nanohana ny iPhone ho iCloud ianao Talohan'ny nanaparitahana izany ary nampiasa iTunes ianao mba hamerenanao DFU ny iPhone, esory ny iPhone amin'ny solosainao. (Efa tsy voahidy io raha mampiasa iCloud ianao hamafana ny iPhone-nao). Mifidiana Avereno amin'ny iCloud Backup mandritra ny fizotry ny fametrahana amin'ny iPhone.
Raha nanohana ny iPhone ho iTunes ianao alohan'ny kilemaina sy famafana azy amin'ny alàlan'ny iCloud.com, safidio Avereno amin'ny iTunes backup mandritra ny fizotran'ny fananganana. Raha namerina tamin'ny laoniny ny iPhone ianao tamin'ny alalàn'ny iTunes dia safidio ny hamerina amin'ny laoniny avy amin'ny iTunes backup anao amin'ny alàlan'ny efijery Set Up ao amin'ny iTunes.
Raha tsy manana backup ianao , Mamporisika anao aho esory ny iPhone amin'ny solo-sainanao (efa izany raha mampiasa iCloud.com ianao hamafana ny iPhone) ary hametraka ny iPhone raha tapaka amin'ny iTunes. Azonao atao ny mampifangaro ny iPhone amin'ny iTunes aorian'ny nametrahanao azy, raha izany no tianao hatao. (Tsy manao izany aho.)
iPhone dia azo atao!
Efa mandeha ny iPhone-nao ary efa nianaranao ny antony iraisana mahatonga ny iPhones ho kilemaina voalohany. Raha tsy mandeha indray ny iPhone dia hainao tsara ny manamboatra azy. Raha te-hametraka hevitra ianao, dia liana amin'ny fomba nanapahana ny iPhone-nao tao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Misaotra tamin'ny famakiana sy ny fahatsiarovan-tena handoa izany,